Caawi – Najax Xasan Maxamud waa Gabadh Xanuusanaysay oo beryhananba ka dhex muuqatay social media ha iyadoo Burco dhexwareegaysa ayaa lagu guulaystay in Hargeysa lagu soo celiyo oo la daryeelo | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Published on October 29, 2019 by sdwo · No Comments
Daawo labadan clib kan hroe waa markii hareyga lagu soo celiyey iyadoo caafimaad ahaan aad u wanaagsantay tan iyo intii burco dawooyin iyo daryeel loogu bilaabay. Clipka labaad na waa markii suuqa burco ay dhex wareegaysay iyadoon miyir qabin. Hadaba si gabadhan Najaxa Xasan Maxamud nolosheeda loo dejiyo waxay u baahantahay gacan qabad balaadhan oo uu ugu horeeyo hooy iyada iyo 3deeda caruuri degaan iyo daryeel caafimaad. Hadaad rabtid inaad ka qaybqaadatid waxaad toos u wici kartaa numberkaa sawirka najax ku hoos qoran. Qaybtayada Samafalka ee SDWO Releif Project waxay idinka codsanaynaa inaad ka qaybqaadatan hor ilaahay ugu kacdaan inantaa yar ee 25 jirka ah ee la il daran xauunka dhimirka. Nagala soo xidhiidh Samafal@sdwo.com. ilaahay ha ka abaal mariyee waxa xil weyn iska saaray oo umadda muslimiinta ah u soo bandhigay clips kii uu burco kaga duubay Raage Xasan Raage.
Waa clip kii hore ee markay suuqa Burco dhexdeeda waalni wareegaysay – Najax ilaahay ha caafiyee